Home - Xisbiga Qaransoor
Hiigsiga, Xisbiga Qaransoor
U hawlgelida sidii loo heli lahaa qaran awood u leh isku filnaansho dhaqaale iyo mid amni, horumarinta laamaha sirdoonka iyo militariga, la dagaalanka xagjirnimada, dhisida nidaam waxbarasho oo ku dhisan tayo aqooneed iyo mid diineed.
Xisbiga Qaransoor ayaa raba inuu la yimaado fikir iyo dhaqdhaqaaq dhiirrigeliya danaha umadda, gaar ahaan ujeedada Faahfaahin
Fiiri alaabada ugu cusub dukaanka kaliya halkaas oo 100% macaashka ay galaan xisbiga Qaransoor.
Waxaan raadineynaa qof Daneeyaayo, Qaransoor hibo leh oo ku soo biira kooxdayaga oo wadankaan ka dhigaya buluug. Nagu Saabsan
Mask	Nagu Deeq
Caddaalada & Garsoorka
“Caddaalad in la dhiso oo lagu dhaqmo waa mid ka mid ah asbaabaha ay u taagan tahay Xisbiga Qaransoor.”
Nidaam Waxbarasho aan Horey Loo Arag
"Dhisida nidaam waxbarasho oo ku dhisan illaalinta caqlaaqda, diinta Islaamka, teknollijiyada, soo saarista xirfadleyaal iyo illaalinta taariikhda ummada Soomaaliyeed."
Dhisida Awood Militari & Haayad Sirdoon
“U hawlgelida sidii loo dhisi lahaa awood ciidan iyo haayad sirdoon qaran oo tayo fiican leh.”
Dhisida Nidaam Dhaqaale
"Dhisida nidaam dhaqaale oo ku dhisan Illaalinta xaqquuqal insaanka, rag iyo dumarba la siiyo fursado loo siman yahay."
Fiiri Dhamaan Mabaadii'da
Ma dooneysaa qarannimo Soomaaliyeed?
Guddoomiyaha Xisbiga Qaransoor Cabdijabaar Sh. Axmed ayaa warqad Hambalyo u diray ummada Soomaaliyeed oo ku aadan huska maalinta 15 maay ee ururkii SYL
Anigoo ah Guddoomiyaha Xisbiga Qaransoor, Cabdijabaar Sh. Axmed waxaan halkaan ugu Hambalyeynayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed
Xisbiga Qaransoor ayaa Hambalyo iyo Baaq ku aadan samata-bixinta dalka u diray Madaxweynaha cusub ee ay doorteen Baarlamaanka 11aad Mudane Xassan Sheekh Maxamuud
Xisbiga Qaransoor ayaa Hambalyo iyo Baaq ku aadan samata-bixinta dalka u diraya Madaxweynaha cusub ee
Xisbiga Qaransoor wuxuu ciidamada XDS ugu Hambalyeynayaa munaasabadda 62-sano guuradda ka soo wareegatay aas-aaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Xisbiga Qaransoor wuxuu ciidamada XDS ugu hambalyeynayaa munaasabadda 62-sano guuradda ka soo wareegatay aas-aaska ciidanka
Fiiri Dhamaan Wararka
Tweets by UNSomalia